Sina dia fitsangatsangana poetika – Fitsangatsanganana any amin'ireo mpamokatra sy mpamatsy ny Farihy Qiandao | Mia Creative
Dia Poetika – Fitsangatsanganana mankany amin'ny Farihy Qiandao
Amin'ny faha-17 Oktobra, ireo mpiara-miasa amin'ny sampana orinasa voalohany dia vonona ny handeha ho any amin'ny farihy Qiandao tsara tarehy, ary efa hanomboka ny ora mahafaly!
Ny toetr'andro tamin'io andro io dia tena namelombelona, ​​ary ny toerana manodidina teny tsara tarehy ihany koa. Ireo zavamaniry maitso emeraoda sy tranobe isan-karazany eny lavitra dia namorona sary voajanahary miaraka amin'ny lanitra manga, izay nahatonga ny olona hahatsapa ho tsara kokoa.
Tao anaty fihomehezana teny an-dàlana, rehefa nandeha fiara mihoatra ny 2 ora ny olona, ​​nony farany dia tonga tao amin'ilay villa efa namandrihana. Ny villa dia miorina eo amoron'ny Farihy Qiandao mahafinaritra. Sokafy ny varavarankely dia afaka mahita fomba mamirapiratra amin'ny endrika ivelany ianao, maka rivotra madio ary manasa ny fanahinao. Misy savily, solosaina, fotaka DIY ary toerana fialamboly hafa any ivelany, ary mifalifaly ihany koa ny ankizy
Ny tolakandro voalohany amin'ny zotram-pitaterana dia ny Tianyu Observation Deck malaza. Ny Tianyu Observation Deck dia miorina amin'ny Tianyu Mountain. Tsy avo ny tendrombohitra. Ny haavony dia eo anelanelan'ny 235 sy 310 metatra. Io no sehatra hijerena tsara indrindra ho an'ny farihy Qiandao. Rehefa avy niakatra tamim-pahombiazana tany an-tampony, nijoro teo amin'ny lampihazo fijerena eo an-tampon'ny Tendrombohitra Tianyu, dia manana ny vanim-potoana "eo an-tampon'ny tendrombohitra ary mitazana ireo tendrombohitra". Avo eo an-tampon'ny tendrombohitra ny sehatra hijerena, misy fomba fijery malalaka sy fijerena ny manodidina azy, ny ony tsy manam-petra amin'ny Qiandao Lake Bridge, ny filentehan'ny masoandro Qiandao tsara indrindra, ary ity farihy sy tendrombohitra ity.
Ny fijanonana faharoa-Hongye Bay.
Hongye Bay dia an'ny faritra Pingfeng Scenic ao amin'ny faritry ny farihy afovoan'i Qiandao Lake Scenic Area. Eo anelanelan'ny saikinosy Xiaojinshan sy ny nosy Jinxian no misy azy, izay fantatra amin'ny anarana hoe Xiaojinshan. Ny haavon'ny bay dia toy ny fitaratra, madio sy manga ny farihy, ary ny taratry ny tendrombohitra sy ny ala dia mazava sy mamirapiratra; mitsivalana sy marindrano ireo nosy, ary manankarena ny tany, misy tendrony sy lohasaha ary tehezana, ary antsoina hoe maze rano
Tsy fantany fa tonga ny hariva, ary nilatsaka ny lanitra. Niverina tany amin'ny villa daholo ny rehetra ary nanomboka ny fiainana alina falifaly!
Nivory nanodidina ny sofa ny rehetra mba hijery ny lalao, ny fialamboly ary ny sakafo, izay hita fa tena tsara tamin'ity oram-be ity.
Vao tsy ela akory izay, horonantsary "Ny tanàna nahaterahako sy ahy" no aseho manerana ny firenena. Anisan'izany, ny Sekolin'ny Kilonga Fuwen Township misy trano fitaratra miloko dia manaitra ny olona amin'ny firenena iray manontolo. Ity no tanjontsika ny ampitso.
Ny trano avana any an-tendrombohitra dia manafina nofy angano fahazaza. Loko 26 no mifamatotra. Ilay trano fitaratra eo alohanao dia lasa toeram-ponenan'ireo mpanao matoatoa. Ny vera mangarahara dia voaravaka loko nofinofy. Ny trano eo ambanin'ny lanitra manga dia mamirapiratra sy tsara tarehy. Tsofy ny rahona fotsy, avelao ny ala maintso hanaraka azy ireo.
Ny sisin-tany fotsy dia manoritra ireo trano bongo ary zavakanto kanto kokoa ireo trano mifatotra. Mijoro eo amin'ny fefy ilay vorona, ary ny raozy miakatra dia nihanika mangingina teo amin'ny arofanina. Manodidina ny sekoly fanabeazana fototra ny voninkazo. Kanto ny zoron-tanàna. Tonga zaridaina kely.
Rehefa nijery ilay tarehimarika teny amin'ny tany aho dia nivelatra ary avy eo fohy kokoa, nahatadidy ny fotoana naha-zatovo ahy, dia nivadika ho tsy miraharaha izany, ary ny feon-kira "Zazalahy kely" dia re tao an-tsofiko, izay tena mety amin'ny sehatra.
Ao amin'ny làlam-pitrandrahana, ny lokna dia nitazona tsikelikely ny lokon'ny fararano, ary osmanthus kely dia namony tamin'ny hazo. Rehefa nifofofofo ny rivotra, dia nanenika ny tampon'ny fofona ny fofona. Feno ny loko fararanon'ny zaridaina, ary tsy azo nakatona ny rindrina. Teo amin'ny rindrin'ny campus dia nisy sary hosodoko natao hoso-doko izay maneho ny hatsarana voajanahary ary manafina ny tsy fananan-tsiny ataon'ny olon-dehibe ho an'ny ankizy.
Ny takelaka akrilika maroloko dia afaka mamorona sekoly mety tsara ao am-ponao ihany koa. Iza no milaza fa nofy ihany ny nofy. Rehefa hita taratra amin'ny zava-misy ny nofy dia hitan'izy ireo fa mety ho tsara tarehy toy izao tontolo izao.
Ny tànana eo am-baravarana sy eo am-baravarankely, ny maripanan'ny hazavana dia tavela ao anaty vera, ary ny aloka eo amin'ny varavarankely fitaratra dia manana famirapiratana mamirapiratra ihany koa, avo ny zoron'ny vava, ary mahafinaritra kokoa izao tontolo izao.
Tapitra ny dia mahafinaritra mankany amin'ny Farihy Qiandao. Ity fitsangatsanganana ity dia tsy nanamafy ny fifandraisan'ny mpikambana ao amin'ny departemanta ihany, fa namela ny tsirairay ihany koa handray ny asa manaraka amin'ny toe-tsaina tsara kokoa. Ndao isika hanohy hiasa mafy ary hanohy dia mahafinaritra amin'ny taona ho avy
Fotoana fandefasana: Des-23-2020
Mifandraisa amin'olona: Bonnie Zhang (Tale varotra)